Maareynta Multiple Apple Qalabka la One ID Qoyska Apple ma aha qarow
Waxaad tahay iPhone 6 user ah, halka aad xaaskiisa iyo gabadhiisa ugu weynaa ayaa iPhone aamin 5 users. Dhinaca kale, wiilkaaga aan gurigooda ka tegin ka maqnaan doona uu iPod Touch oo aad ugu yar si joogto ah u ciyaaro "Bird careysan" iyada iPad. Tan iyo markii ay qof walba waa hal madal ay, aad go'aansaday in hal ID Apple ka dhigaysa tirada guud ee dareen.
Marka hore, waxaad awoodi doonaan in ay xakamayso kharashyada qoyska ee Chine iibsaday. Marka labaad, qof kasta ayaa heli kara barnaamijyadooda, filimada ama music in la iibsaday ka yar xisaabtami. Tani waxay idinka Koriya lacag aad u badan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadooda iyo adeegyada hadda ku xidhan mid ID Apple ka dib markii hordhaca ah ee macruufka 5 iyo iCloud ah. Maxay ahayd mar dhaw raaxadeeda waxa hadda waa qarow; waxaad weli u xakamayn kartaa iibsadaan, laakiin macluumaadka gaarka ah la wadaago qoyska ma aha waxa aad rabto lahaa.
Dhibaatooyinka Common la ID Sharing Apple
Wadaagista ID Apple ah guud ahaan qalabka kala duwan ee qoyska ka mid ah waa xaalad caadi ah oo caalamka oo dhan. Iyada oo ay tani waa wanaagsan yahay, waxa ay sidoo kale keeni kartaa madax xanuun. Ka soo qaad in qalabka oo dhan ku farxayaa in ay ID hal Apple; iyadoo mid ka mid ID, qalabka waxaa lagu gartay inay isaga ku leedahay mid la mid ah milkiilaha. Sidaas darteed, qoraal ah oo ka soo iMessage ka soo Hooyo ee iPhone tusi doonaa on wiilkeeda iPad. Codsi Facetime A ka gabadhii saaxiibkiis la helay karaan Dad lahayd. Photostream ayaa dhanka kale, la daadadku doonaa durdurro sawiro ka imanaya qof kasta oo qoyska.
Haddii xubin qoyska ka mid ah ku iibsaday iPad cusub oo ay isticmaalaan aqoonsiga isla Apple, qofkaasi wuxuu noqon doonaa in aan wax yar ka soo bixi barnaamijyadooda iibsaday awoodo, laakiin sidoo kale qof walba oo xiriir entries jadwalka guuriyeen in qalab cusub iyo sidoo kale. Iyadoo la wadaago waxay noqon kartaa wax fiican, la wadaago oo aad u badan waxay noqon karaan kuwo dhib badan.
Adeegsiga ID Sharing Apple ee Iibsasho Lugood / App Store
Si ay u sii fahmaan, waxaa fiican in la ogaado sida aqoonsiga Apple iyo adeegyada ay u shaqeeyaa. Ka hor inta aan hordhaca ah ee macruufka 5, ID Apple la inta badan loo isticmaalaa iibsadaan hoos Store Apple ama Lugood. Post macruufka 5, isticmaalka ee ID Apple ayaa la kordhiyay si ay u daboosho hawlaha adeegyada kale.
Ka fakar ID Apple sida ka shaqeeysa laba qaybood; Your Iibsasho (barnaamijyadooda) iyo xogta shakhsiga ah (contacts). Iyadoo la raacayo, in ka badan .Wadashaqayntaas xogta dhowr dhacay iyo ceelkan aan yeelin marka macluumaadka gaarka ah waxaa la wadaago. Adeegyada ku farxayaa in ay ID Apple ah waxaa ka mid ah iCloud ah (in ay keeni doonaan in la wadaago ee waraaqaha iyo jadwalka), iMessage iyo Facetime; magaca yar.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeclaan lahayd in ay weli ka mid ID Apple inay si gaar ah u maamuli iibsadaan qoyskaaga iyo aad Leexin Kalimooyinka Meelahooda macluumaadka gaarka ah, waxaad samayn kartaa si go'aan ay u fidinno IDs Apple shakhsiga ah ee qof walba oo qoyska si ay u isticmaalaan xogta shakhsiga halka la wadaago mid ka mid ID Apple oo kaliya wax iibsigu ujeedooyin. Si fudud raac tallaabooyinka hoose si ay u wadaagaan ID Apple ah dhinca Apple Store iyo Lugood,
Talaabada 1: Settings Open iyo Dooro Lugood & App Store
On aad qalab, u tag "Settings" oo la furo "Lugood & App Store". Ku celceli ku saabsan dhammaan aaladaha in la wadaageyso ID isla Apple.
Tallaabo 2: Ku qor Apple ID la wadaago iyo Password
Marka "Lugood & App Store" waxaa la furay, oo muhiim ah in aqoonsiga iyo password Apple la wadaago. Tani waa ID Apple ah in aad rabto in aad isticmaasho si aad u iibsadaan. Xaaladdan oo kale, halkaas oo mid ka mid ah qalab aan la isticmaalayo aqoonsiga la wadaago Apple, saxiixo oo ka soo baxay ay ID jira iyo ka gala wadaago faahfaahinta Apple ID ee.
Waayo, macluumaad, gadashada laga sameeyey Apple xisaabta ID la wadaago si toos ah lagala soo bixi doonaa dhammaan qalabka Apple xiran xisaabta labada dhinac. Si looga hor ka dhacaya, dami ah "Automatic Downloads". Tani waxaa laga heli karaa "Lugood & App Store" goobaha.
Adeegsiga ID gaar ah Apple for Data Personal
Hadda oo aad la wadaago ID Apple aad u iibsadaan, waxa aad u leedahay in la sameeyo si ay u dhawrto warbixin-shaqsiyeedkaaga sooci user kale? Waxaad si fudud u gaadhi karnaa iyadoo la isticmaalayo aqoonsiga Apple gaar ah aad shaqsi ee samaynta iCloud iyo adeegyada kale ee loogu talagalay qalabka kasta.
Talaabada 1: Saxiix-rogmatay iCloud
Under Settings qalab kasta ', ka dooro iCloud iyo is-rogmatay App ah.
Isticmaal ID aad shakhsi u gaar ah Apple iyo password inay la soo wareegto ku saabsan qalab kasta.
ICloud ayaa hadda waxa kaliya ee idinkaa iska leh in la arko. Qaabeynta Tani waxay sidoo kale gab doona isku xirka in ID hore Apple iyo xogta xidhiidh la leh sida entries jadwalka mar dambe ma la heli doonaa.
Talaabada 2aad: La socodsii Services App aad ID Apple Individual
ICloud ka sokow, waxa kale oo aad u baahan doontaa si aad u cusboonaysiiso ID qofka Apple adeegyada iyo barnaamijyadooda kale in isticmaalayaa aqoonsi la wadaago Apple hore. Wixii iMessage iyo FaceTime, si raxmad leh cusboonaysiiso ID cusub shaqsi Apple oo waxaa laga heli karaa goobaha iCloud.
Tubada on "Messages" iyo "FaceTime" oo intaas ka yar waxyaabaha kasta, madax si Lugood Apple ID iyo iyaga cusboonaynsiinta.
Hadda, aad si guul leh loo qaybiyay barnaamijyadooda iyo adeegyada aad la leedahay ID cusub Apple. Taas macnaheedu waa in macluumaadka shakhsi aad hadda jira aan la arki karo in xubnaha kale ee qoyska.
> Resource > iCloud > Maareynta Multiple Apple Qalabka la One ID Apple Qoyska hadda lama Nightmar ah